Diarin’i sipagasy » 2016 » Janoary
Archive for Janoary, 2016
Janoary 16th, 2016 | Category: izaho
Misy amintsika ve tsy mbola nitia? ataoko fa tsy misy izany…… raha mbola nateraka ihany dia misy izany fitiavana izany fa mety hoe modiana tsy henoina, na ampanginana ngamba raha mihaino sy mijery ny vaovao maneran-tany @ izao fotoana izao isika….
Ny fitiavana dia tsy ho voatery ho foafaritra ho atokana amin’olon-tokana ihany, azo atao tsara ny mitia olona maro fa tsy mitovy kosa ny tsapa amin’izy tsirairay avy. Misy ambaratongany ihany koa izy io, ambarako aminao anie e!
Ny fitiavana ny ray aman-dreny aloha raha mbola kely ny zaza, satria dia ireo no nahitany masoandro, nahitany ny tsimbok’aina, ahafahany hirehareha eto an-tany. Azo ampidirina ao izany ny fitiavana ny mpiray tampo, satria dia iray aina iray vatsy ireo.
Manaraka indray dia ny fitiavana ny mpiara-belona: satria dia ireo no mpanabe voalohany, sy hifaneraserana voalohany ihany koa, ny fiaraha monina indrindra no sokajiako eto ary azo atao anatin’izany ny fiangonana sy ny toeram-piasana.
Eo ihany koa ny fitiavan-tena, satria nahoana hoy ianao? raha tsy tianao aza ny tenanao sy ny maha ianao anao, ahoana moa no hitiavanao ny manodidina anao? Somary sarotra ihany anefa izany satria dia eo @ fitaizana hatrany @ fahazazana no zarina ho tia tena nefa tsy ho diso tafahoatra ihany koa isika….. Ahoana moa izany? Fitiavana toy ny rehetra ihany izy io saingy miavaka kely, eo no ataon’ny vazà hoe ‘estime de soi’ ihany koa. Mahalaza zavatra betsaka izany, milaza ihany koa fa hainao ny mandanjalanja ny fitiavana omenao sy raisinao avy @ olona manodidina anao, na @ toetra izany na @ asa vita izany….Io fanomezan-danja ny fitiavanao io ihany koa dia ahafahanao manome ambaratongam-pitiavana ny olona mifanerasera aminao, tsy ho voatery tiavina daholo akory ny olona rehetra….
Ary raha hiditra @ fitiavan’olon-droa indray isika dia mmhh, misy ambaratongany izy io. Misy anefa olona ao anatin’ny androm-piainany dia tsy handalo izany ambaratonga rehetra izany fa mety ho ny 1 na ny 2 @ izay fotsiny ihany, fa rehefa miaina anaty fitiavana dia izay no izy e!
Tsy tokana hoy aho teo ambony ny fitiavana, ary tsy hitovy na oviana na oviana ny hitiavanao olona tsirairay avy, tsy hoe akory izany dia misy ny fiangarana eo @ fitiavan-janaka sanatria ho an’ny ray aman-dreny fa ny fanehoana izany fitiavana izany kosa no tsy mitovy.
Raha eo @ olon-droa ihany koa dia misy ambaratongany izy io:
Ny Fitiavana miredareda: mmhh iza t@ mpifankatia no tsy mbola niaina io?? toa zary ziona ny manodidina fa tsy misy afatsy izy roa irery no ety an-tany. Ny tsara ho fantatra anefa dia tsy maharitra io fahatsapana fitiavana miredareda toa afo io fa miserana ihany, mety ho 1 taona na 1 volana fa an’ny tsirairay moa iny… mankaleo ny miaraka miresaka amin’olona ao anatin’io fitiavana io ann, satria dia tsy misy afatsy izy 2 no ambetin-dresaka hihihi.
Ny Fitiavana mambabo-fo: izany hoe tsy misy afatsy izy 2 ihany tsy mila olon-kafa ry zareo, mihidy ao izany izy, tsy manaiky ny fidiran’ny hafa à resaka ataony na ny fiainany akory ……ohatra hoe miaraka mifanjohy eny foana, miantsena, manao fanatanjahan-tena, na miaraka mivoaka fa tsy mba misy fotoana hoe iny eny i ramose fa mandeha irery na koa i madama fa mba niaraka niantsena t@ namany, tsy haindry zareo izany izay e!
Ny Fitiavana mahafatifaty ilay feno angolangola iny: eto indray dia mazàna olona efa somary nandia fiainana no ahitana azy, efa tsy ao intsony ilay fitiavana naha taitaitra tany am-boalohany nefa tsy maty ihany koa na tsy azo atao koa nefa hoe miredareda…. mitady antoka ny roa tonta, izany hoe efa eo @ rotorotom-piainana sy fitiavana ka mitady toerana tsara amaharana.
Ny Fitiavana miaro ady: misy amintsika ngamba mahafantatra olon-droa tsy ialan’ady nefa dia indreny mifanjohy eny ihany fa tsy mahasaraka, dia izay ilay izy. Tsy hoe tsy tiana akory ilay olona ialàna ady.. tsia… fa zary fomba fiaina ilay izy.
Ny Fitiavana ara-nofo: mmhhh tsara be izany, ary izay no tena izy, tsy ampy anefa raha izay ihany no ataao lafika hanorenana tokan-trano. Tsy misy maha menatra io fitiavana io nefa kosa tsy ampy, azo atao tsara ny manampy azy @ filàna hafa iarahan’ny mpivady.
Ny Fitiavana nofisina: izay eritreretina mafy ho tanteraka, tsy misy fifampikasohana ara-batana mihintsy fa dia ara-tsaina sy valan-dresaka no betsaka aloha. Mety ho hita izany eo à olon-droaa miara miasa ohatra, izay io asa io no ifantohan’ny fiainan’izy roa manontolo, na koa hoe miaraka manao fanatanjahan-tena na miaraka mivoaka any à tranom-boky dia efa mahazo fahafinaretana à izay ilaay olona anankiroa dia ampy ho azy ireo izay, raha tsy mitandrina anefa ry zareo dia mety ho ritra tanteraka ny fitia ary ho tonga à fisarahana izany.
Ny Fitiavana diso fatra: na koa hoe diso mihoa papana loatra, izany hoe lasa misy fandeferana eo à ankilany ary fanomezana vahana ny an-kilany kosa ilay fitiavana, mandeha ila ny mizàna eto. Lasa manadino ny tenany mihintsy aza ilay olona eto fa lasa hoe miaina ho an’ilay silany……mahalasa saina ihany nefa dia misy tokoa izany… manao sorona ny tenany izany.
Misy ihany koa anefa ireo mpifankatia tsy miaraka mitoetra fa samy manana ny ankaniny, toa zary lasa fiainana izany ankehitriny satria mahaleo tena ny tsirairay avy, ireo voatanisako eo ambony akory tsy midika fa tsy misy fahaleovan-tena ara-bola ny tsirairay an, tsia fa ireo ambony ireo dia miara-monina ny mpifankatia. Amin’ity sehom-pitia ity dia efa olona matotra no mampiasa azy, sy miaina azy, satria mila fahatokisana 100% eo @ ankilany aavy izany, tsy hoe akory rehefa tsy iray trano ihany no atao hoe mpifankatia, misy ny tokan-trano miaina tahaka izao, ary mateza sy maharitra satria misy tokoa ny fifanajana eo à roa tonta. Tsy hoe akory tsy misy fifanajana @ iretsy eo ambony fa ity seho ity dia miavaka satria tsy miaina afatsy ny lafi-tsarany ny mpifankatia, na misy aza ny lafi-ratsiny dia ezahin’izy ireo ho ny tsara hatrany no hihaonany…..
Raha misy azonareo anampiana ny voasoratro dia aza misalasala fa tsy nandalina io aho akory fa mba namakivaky boky teny dia hitako nisongadina ireo ary tsy aritro ny nizara azy taminareo.